Villas tsara tarehy manana fanaka tsara tarehy - nozarain'ny mpanjifa avy any Nizeria
Ny villasy tsara tarehy sy tsara tarehy dia mila mifanentana amin'ny fanaka mahazatra amin'ny tsiro sy ny haitraitra mitovy. Misaotra an'ireo mpanjifan'ny Nizeriana noho ny fahatokisan'izy ireo sy ny fitiavany an'i James Bond Furniture, manana ny tantaran'ny 36 taona ny orinasa anay. Ny dingana famokarana dia tena matotra ary tena tsara ny kalitao.
Ny fanaka mahazatra an'i James Bond Furniture dia amidy amin'ny firenena 35 samihafa, mirakitra fianakaviana tsara tarehy 5000. James Bond Furniture dia lasa iray amin'ireo marika fanaka 10 mahazatra mahazatra any Chine sy ny marika fanaka 20 mahazatra amin'ny tany eto an-tany. Manantena aho fa betsaka kokoa ny mpanjifa afaka misafidy ny fanaka mahazatra mahazatra kalitao avo lenta!